PSG Oo Hoggaamineysa Tartanka Saxiixa Messi – Garsoore Sports
PSG Oo Hoggaamineysa…
Kooxda kubbada-cagta ee Paris Saint-Germain ee Faransiiska ayaa hoggaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Lionel Messi kaddib markii xiddiga ku guuleeystay abaalmarinta Ballond D’or ay kooxdiisa Barcelona ku dhowaaqday inuu ka tegay.
Kooxda xigta ee xiddiga reer Arjentiina ku biiro karo ayaa la is weeydiinayaa iyadoo ay jiraan kooxo dhowr oo lagu shaaciyaya wargeysyadda taniyo markii uu soo baxay warka la xiriira bixitaanka Lio.
Kooxda Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa ah kooxda haatan hoggaanka u heysa qarka u saaran inay ku dhawaaqdo saxiixa Lionel Messi.
Waxaa jira warar la isla dhexmarayo warbaahinta oo sheegaya in Barcelona ay dooneyso inay cadaadis ku saarto La Liga si ay ugu oggolaato inay Messi ka diiwaangeliso heshiis cusub inkastoo ay haysato dhibaato dhaqaale, sidaas darteed PSG ayaa lagu booriyay inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqdo Messi kahor inta aan go’aankii ka tegitaanka la beddelin.
Lionel Messi ayaa kooxda Barcelona waayihiisa cayaareed u saftay 778 kulan waxaana uu u dhaliyay 672 gool isagoo 305 gool oo kalena caawiye kasoo noqday.
Wuxuu xiddigan ku guuleeystay 10x La Laga ah, 7x koobka Copa Del Rey ah, 8x Super Copa De Espana, 4x Champions League 3x Uefa Super Cup, iyo 3x Club World Cup. Waxaa intaa dheer inuu ku guuleeystay abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan dunida ee Ballon D’or 6 jeer oo ah tiradii ugu badneyd ee abid keliya waxaa ku soo xiga Cristiano Ronaldo oo 5 jeer ku guuleeystay abaalmarintaa.
PSG Oo Wadahadalo Kula Jirta Lionel Messi